Global Voices teny Malagasy » Brezila: fahatsiarovana an’i Ayrton Senna, Tompondaka F1 tsy nety resy · Global Voices teny Malagasy » Print
Brezila: fahatsiarovana an'i Ayrton Senna, Tompondaka F1 tsy nety resy
Voadika ny 04 Mey 2009 8:43 GMT 1	 · Mpanoratra Paula Góes Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanatanjahantena
“Ayrton Senna  da Silva. Velona tsy mety resy, maty tsy misy mahasolo voasolo”, hoy ny iray amin'ireo vohikala maro  mahatsiaro ilay intelo tompondaka erantany tamin'ny Formule 1, ary nanohina an'i Brezila sy izao tontolo izao ny fahafatesany tamin'ny voalohan'ny volana mey 1994. Nitari-dalana nandritra ny Grand Prix de San Marino 1994 , tsy nahafehy ny fiara nentiny i Senna ka nampisosa azy teo amin'ny fiolahan'i Tamburello. Niteraka alahelo lehibe teo amin'ny mpankafy azy ny fahafatesany ,raha vao 34 taona monja izy ka mbola isaonany hatrany 15 taona aty aoriana.
“Raha sanatria tratran'ny lozam-piarakodia mety hiantraika amin'ny aiko aho, iriko raha tonga dia maty aho. Tsy tiako ny hotarihina amin'ny seza misy kodiarana. Tsy tiako ny hijalijaly any amin'ny hopitaly amin'ny karazan-dratra na voina rehetra. Raha mbola miaina aho, dia aleoko miaina izany manontolo, feno sy mavitrika, satria olona mavitrika aho. Manimba ny fiainako raha miaina tapatapany aho.”
Ny anaran'i Ayrton Senna amin'izao fotoana izao no anisan'ny be mpametraka indrindra ao amin'ny Andavanandro breziliana  ao amin'ny Twitter. @biellebrunner  ohatra namoaka sary iray  mampiseho ny famangiana nataony teo amin'ny tsangambato teo amin'ny toerana nahafatesan'i Senna, teo amin'ny fiolahan'i Tamburello. Vinicius Cordeiro  [pt] tamin'ny fiandohan'ny herinandro no iray tamin'ny nahatsiaro ny fahafatesany voalohany tamn'ity taona ity. Hoy izy hoe:
Feno ny foko isaky ny manatona ny voalohan'ny volana mey: taona iray hafa tsy misy an'i Ayrton Senna indray… nanatrika ny hazakazaka aho tamin'iny fotoana iny. :'(
Tsy irery i Cordeiro mijery fahitalavitra indray alahady izay maizina indrindra teo amin'ny tantaran'i Brezila. Nahita ny fahafatesan'ilay Aotrishiana Roland Ratzenberger  i Imola iray andro monja mialoha ny loza nahazo an'i Senna. Tsy misy very ao amin'ny fahatsiarovan'ny olona maro ny sary, ny fialan'aina, ny hirifiry niainana. Hoy i Guilherme Tsubota  [pt] mahatsiahy ity andro mahory ity:
Andro ratsy indrindra tamin'ny fiainako ny fahafatesany, izay indrisy nifanandrify indrindra tamin'ny vaninandro ahatsiarovana ny nahaterahan'ny reniko. Tsaroako ny fahataitairana sy ny fitokisana fa amin'ity Loka lehiben'i Imola ity, dia hahasongona ilay “Rainiboto” i Ayrton, ary araka ny mahazatra dia nifoha maraina aho hijery ny fifaninanana. nipetraka teo amin'ny sezalava aho nandritra ny tontolo andro, nanaraka ny sombim-baovao rehetra tamim-pahagagana. Aniveriseran'ny vahiny? Tsy nahare izay fahatongavana na fahalasanan'ny hafa aho, tsy tadidiko akory ho niresaka taman'olona aza aho. Ny hany tsaroako dia ny sary sy ny tantara navoakan'ny Globo TV broadcast momba ny loza nahazo an'i Senna.
Niditra ho tantara ny andro manaraka, ary nahatsiaro izay rehetra niaina tamin'iny fotoana iny, indrindra ny avy any São Paulo, hoe tahaka ny ahoana ny niatoan'ny tanàna ho fanajana azy. Tena nahavariana, zavatra tsy mbola hitako mihitsy nialoha io fotoana io.
“Any andro iray, mandritra ny toe-javatra iray, mieritreritra ianao fa manam-petra. Ary dia manatratra io fetra io ianao ka tratranao izany, dia hoy ianao, ‘Okay, hatreto ny fetra.’ raha vao tratranao io fetra io, dia misy zava-mitranga ary dia mbola afa-mihoatra kely tampoka ianao. Miaraka amin'ny herintsainao, fikirizanao, herimponao sy ny traikefanao mazava loatra, dia afa-misidina avo ianao”
Nanararaotra nahatsiaro ny rainy izay fan(ina) an'i Senna sady misy fifanandrifian-javatra mahagaga mampanakaiky ny rainy amin'ny maherifony i Eduardo P.L  [pt]. Ho an'ity mpamaham-bolongana ity dia kamban'alahelo no iainany:
Indray Asabotsy, 15 taona lasa izay, teo ampisakafoanana tao amin'ny restaurant iray no naharay antso nilaza fa maty ny raiko! Nankany an-tokatranon'ny ray aman-dreniko aho, dia nandevina an'i dokotera Santo izaho sy ny reniko, ny mpiray tampo amiko, namana sy olompantatra vitsivitsy. Tonga ny alahady, izany hoe andro iray taty aoriana, maty i Senna. Raha heverina, fifanandrifian-javatra mampalahelo. Herinandro taty aoriana dia tonga teto Brezila ny razana, ary taorian'ny fiandrasam-paty dia nalevina teo anilan'ny fasan-draiko izy, miray tokotanim-pasana ry zareo. Na aiza na aiza misy azy ireo, miara-dalana izy ireo tahaka izay notadiavin'ny raiko.
Ricardo Vieira  [pt] no manazava ny tsy fahafaha-mionon'ny olona anarivoarivony teo ampahalasanan'i Senna:
Namela olona an'arivoarivony, ary anisany aho, ho kamboty ny fifaliany, ny ohatry ny fiainany, ny asany sy ny fahazotoany ary ny ngeza indrindra tamin'ny hatsarany dia ny fanetretenany i Senna tamin'ity alahady tsy azo nivalozana ity. (…)
Na dia eo aza ny fahatsiarovana mampalahelo, na eo aza ny embona, dia manana antony maro hanajana ny fiainana sy ny asan'i Senna isika.
15 taona no lasa, fa nasehon'ny Birao Breziliana misahana ny antotanisa sy ny fitsapana ny hevitry ny olona  fa i Ayrton Senna hatrany no be mpankafy indrindra eny fa na dia ho an'ireo taranaka taty aoriana tsy nahalala azy fahavelony sy nanaraka ny asany aza: manakaiky ny 400 ny tanora anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 19 taona no saiky niteny avokoa fa i Senna no mpanao fanatanjahantena ankafiziny indrindra. Tahaka an'i Pele, dia nanome faharisihana ny Breziliana hanana fanajana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Senna. Eo anatrehan'izany dia mino i Alan Ferraz  [pt] fa ny lova tsara indrindra napetrak'i Senna dia ny nahafahan'ny Breziliana mirehareha. Mihetsi-po izy eo am-pahatsiarovana azy:
Tsy tanako ny ranomasoko eto ampanoratana, na dia 15 taona aty aoriana aza. Mino aho fa ho tahaka izany avokoa ny fahatsapan'ireo tia Formula 1 sy ankona (toy ny voatsatok'antsy) tamin'ny fahalasanan'ilay tompondakanay mandrakizay. Ho fahatsiarovana mipetraka mandrakizay ao an-tsain'ny rehetra tsy nahenoana ny hira manakoako manao hoe: “Ayrton, Ayrton, AYRTON SENNA DO BRASIL” intsony ny ampitso ny voalohan'ny volana mey 1994.
“Ao anatin'ny rako ny mifaninana mihazakazaka (fiarakodia). Anisan'ny tenako, anisan'ny fiainako; io hatrany no ataoko mandritra ny fiainako. Ary io no voalohandaharana mialoha ny zavatra hafa rehetra”
Asehon'ny gazety ho miavonavona sy mpihatakataka, mirona kokoa ho amin'ny fandresena fa tsy amin'ny fiaraha-mientan'ny mpitia fanatanjahantena, nampiady hevitra ihany koa ity mpanamory ity teo anatrehan'ny mpijery. Nefa samy nahatsapa ny rehetra, ary tafiditra amin'izany ny tsy mpankasitraka azy loatra tahaka an'i Wilton Sturm  [pt], fa tsy mbola nisy aloha ny tahaka an'i Senna:
Afa-mirehareha aho raha milaza fa nanatrika ny fandresena rehetra nahatratra 41 nataony. Tahaka ny tsapa fa efa nanomboka nanala azy ihany izy, efa niditra tamin'ny fankafizana fahafinaretana ankoatra ny fanapoahana champagne aorian'ny fandresena, dia lasa i Ayrton Senna.
Ankehitriny, banga ny fisiany ary malahelo azy aho. Miezaka aho ny tsy hitsara ny nataony fa hahatsiaro kosa ny zavatra tsara tontosany. Tsy tena “Sennist” loatra aho hatramin'izay saingy, tiako kosa ny milaza, fa mandritra ny fifaninanana Formula 1 iray, dia i Ayrton Senna no mahery indrindra tamin'izay hitako hatramin'izay! Te-hamangy ny fasany aho indray andro any fa tsy fantatro aloha izay fihetseham-poko, fa angamba aho hiteny hoe “misaotra” tamin'ireny fifaninanana goavana ireny, ny fandresena mahafinaritra nasehony ahy!
Namoaka andian-dahatsoratra manokana ho fahatsiarovana an'i Senna ao anatin'ity voatsonga ity i Ricardo César  [pt]:
Voalohan'ny volana May 2009. 15 taona katroka izay ny fahatsapana fa nilaozana na dia ho an'ireo izay tsy niankim-po taminy aza. Misy ny fahatsiarovan'ny olona, tahaka ahy, izay nanaraka ny hazakazaka nataony hatramin'ny fahafolo taonako. Sarin'ny fifanandrinana sy fandresena, isa-maraina, isa-tolakandro na isan-kariva. Fahatsiarovana olona iray izay nitsahatra indray andro tamin'ny fisiana ho olombelona, fa teraka kosa ho angano, angamba ny olomanga efa teraka sahady tao amin'ny firenena iray mitady olona mahery fo. Antsoin'ny hafa hoe ‘da Silva’ izay tsy kivy mihitsy, tahaka ny Breziliana maro. Ho tompondakanay izy mandrakizay.
Misaotra anao Ayrton Senna.
Namoaka lahatsarin'ny fotoana tsara indrindra tamin'ny nataon'i Ayrton Senna ny mpampiasa YouTube aheutohmaluko , ary nampiarahany tamin'ny hira izay nanakoako isaky ny alahady maraina tany Brezila. Mpampiasa hafa koa i 1958misterLotus1994  namoaka ny lahatsarin'ny Loka Lehibe Belza 1985 izay no tantarain'i Senna tenany tamin'ny teny anglisy . ny tenin'i Ayrton Senna di notsongaina tao amin'ny Wikiquotes . Ny sary kosa dia nalaina tao amin'ny vohikala Ayton-Senna.net  sady efa azon'ny rehetra isintonana atontankevitra.
Naotin'ny mpanitsy: 3 Septambra 2010
Ny sary rehetra nalaina tamin'ity lahatsoratra ity dia nalaina avy amin'ny habaka efa tsy misy intsony. Toy izao ny momba azy ireo :
“Tsy fantatr'i Ayrton Senna na fikambanana nisy na misy na hisy fifandraisana amin'i Ayrton Senna. Mariho azafady fa ny sary na lahatsary na afisy rehetra misy an'i Ayrton Senna dia heverina fa ao anatin'ny valam-bahoaka. Raha misy ny mampiahiahy momba ny mety fisian'ny copyright amin'ny votoaty amin'ity tranonkala ity, miangavy mba handefa imailaka amiko dia ho aseriko avokoa ny votoaty manitsakitsaka lalàna rehetra.”
Matoky izahay fa napariaky ny birao mifandray amin'ny fanaovan-gazetin'ny ICN/Marlboro McLaren/Renault ireo sary ireo ho ampiasain'ny fampahalalam-baovao. Raha misy ny zavatra mety ifandirana momba ireo sary ireo dia miangavy hampiasa ny lasitra ifandraisana  raha handefa mailaka ho ahy dia hanala ireo sary ireo aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/04/2161/
 hoy ny iray amin'ireo vohikala maro: http://www.ayrton-senna.com/s-files/index.html
 Grand Prix de : http://en.wikipedia.org/wiki/1994_San_Marino_Grand_Prix
 Andavanandro breziliana: http://blablabra.net/index.php?term=26585
 sary iray: http://twitpic.com/4cvbt
 Vinicius Cordeiro: http://twitter.com/vinnycordeiro/statuses/1641895498
 Roland Ratzenberger: http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Ratzenberger
 Hoy i Guilherme Tsubota: http://guilher.me/elucubracoes/2-rosas-e-uma-bandeira/
 Eduardo P.L: http://elunardelli.blogspot.com/2009/04/ayrton-senna-e-meu-pai.html
 Ricardo Vieira: http://primeirasaguas.blogspot.com/2009/04/nosso-blog-relembra-vida-de-ayrton.html
 Birao Breziliana misahana ny antotanisa sy ny fitsapana ny hevitry ny olona: http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=Not%EDcias&docid=FC0572C2A1F990418325759A005E6AB3
 Alan Ferraz: http://kamundongo.blogspot.com/2009/04/o-melhor-senna.html
 Wilton Sturm: http://www.itu.com.br/colunistas/artigo.asp?cod_conteudo=18043
 Ricardo César: http://www.velocidade.org/2009/04/30/especial-ayrton-senna-15-anos-parte-2-para-sempre-campeo/
 Senna tenany tamin'ny teny anglisy: http://www.youtube.com/watch?v=elznJ2DpNE8
 vohikala Ayton-Senna.net: http://www.ayrton-senna.net/
 Toy izao ny momba azy ireo: http://web.archive.org/web/20080907133306/http://www.ayrton-senna.net/disclaimer.php
 lasitra ifandraisana: https://globalvoicesonline.org/author/paulagoes/